Transporter မင်းသားကြီး Jason Statham ဦးဆောင်ပါဝင်ထားတဲ့ 'The Meg' ရဲ့ First Trailer - MoviesFan
Movie News (929)
Transporter မင်းသားကြီး Jason Statham ဦးဆောင်ပါဝင်ထားတဲ့ ‘The Meg’ ရဲ့ First Trailer
ငါးမန်းထက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အကောင်ကို သိပါသလား… အဖြေမှန်ကတော့ ဧရာမ ငါးမန်းပါ။ သာမန်အရွယ်ငါးမန်းတောင်မှ ဆူးတောင်မြင်တာနဲ့ အသည်းတွေယားနေရတာ သင်္ဘောတစ်စီးစာလောက်ကြီးတဲ့ ငါးမန်းဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပါပဲ။
ကဲကဲ.. Topic ဖက်ပြန်သွားရအောင်။ တစ်ချိန်ကခေတ်စားခဲ့တဲ့ ငါးမန်းကားတွေ အရှိန်သေသွားတာ တော်တော်ကြာပါပြီ။ ကြိုကြားကြိုကြား တစ်ကားတစ်လေတွေ့ရပေမယ့် ကောင်းတဲ့ကားက လက်တစ်ဆုပ်စာလောက်ပဲရှိပါတယ်။ ကျန်တာတွေက B Movie ကားတွေဖြစ်ပြီးတော့ အဲဒီ B Movie ဇာတ်ကားတွေကြည့်ရတာ ဘယ်လိုမှ အာသာမပြေပါဘူး။ အခုတော့ တကယ့်ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ မင်းသားမင်းသမီးတွေနဲ့ ဘတ်ဂျတ်ကို ရေလိုသုံးထားတဲ့ Blockbuster ငါးမန်းကားတစ်ကားလာပါပြီ။
‘The Meg‘ လို့ပဲ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း အမည်ပေးထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားဟာ ၁၉၉၇ ခုနှစ်က ဝတ္ထုတစ်အုပ်ဖြစ်တဲ့ Steve Alten ရဲ့ Meg: A Novel of Deep Terror ကိုမှီငြမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အဓိကဇာတ်လိုက်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သန်းပေါင်းများစွာက မျိုးတုံးသွားပြီလို့ ယူဆထားခဲ့ကြတဲ့ ဧရာမ Megalodon ငါးမန်းကြီးပါ။ တစ်ရက်မှာတော့ သုတေသနအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ရေအောက်ဆင်းပြီးလေ့လာနေတုန်း အဲ့ကောင်ကြီးနဲ့ တည့်တည့်တိုးပါတော့တယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ထုံးစံအတိုင်း အဲကောင်ကြီးကို နှိမ်နင်းဖို့ကြိုးစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းပိုင်းကတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။
ဒါပေမယ့် Cast တွေကတော့ ကြမ်းပါတယ်။ Transporter နဲ့ Fast & Furious ဇာတ်ကားတွေထဲက မင်းသားကြီး Jason Statham နဲ့ တရုတ်စူပါမင်းသမီး Li Bingbing တို့က ဦးဆောင်ပါဝင်ထားကြပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘတ်ဂျက် ဒေါ်လာ သန်း ၁၅၀ သုံးပြီးရိုက်ကူးထားတာဆိုတော့ Production Quality ပိုင်းက ရှယ်ကောင်းမယ်လို့ မျှော်လင့်လို့ရပါတယ်။ The Meg ကို လာမယ့် သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့မှာ စတင်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Action & Adventure, Science Fiction, Trailer
Atsuko	No Comments
Previous Post: အသက်ကြီးပေမယ့် မပျက်စီးသေးဘူးဆိုတာကို ‘Johnny English Strikes Again’ Trailer ထဲမှာပြလိုက်တဲ့ Mr. Bean
Next Post: ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအရှိန်အဟုန် ကြီးမားကြောင်းသိသွားပြီဆိုတဲ့ ဆရာဝန်ဒါရိုက်တာ ထူးပိုင်ဇော်ဦး
Movie News from the World
ပရိသတ်ကို ရင်ခုန်ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပေးမယ့် 50 First Dates February 28, 2019
ကြည့်ရင်းနဲ့ ကျောချမ်းပြီး စိတ်ခြောက်ခြားစရာတွေကို ပေးမဲ့ The Autopsy of Jane Doe February 28, 2019
ဘဝရဲ့အနိမ့်အမြင့်တွေကို ပုံဖော်ထားတဲ့ Les Misérables February 28, 2019
ကရုဏာတရားတွေကို မြင်တွေ့ရမဲ့ The Boxtrolls February 28, 2019
အော်စကာဆုရ ဇာတ်ကား Manchester by the sea February 28, 2019
Thriller ကာတွန်းလေး Coraline February 28, 2019
အော်စကာပါတီပွဲမှာ ပရိသတ်တွေ မျက်စိမခွာနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ Kendall Jenner February 28, 2019
September 2018 (145)
action Action & Adventure Adventure Animation Anime Award Bollywood celebrity news chinese Comedy Crime dating news DC Documentaries Drama Family Fantasy Golden Globe Awards Historical Hollywood Horror Indian Cinema Japan KDrama Korea List live-action/animation Marvel Musical Myanmar Film myanmarmovie Mystery & Suspense Netflix Oscar People Romance science Science Fiction Series Superhero Thriller Trailer True story upcoming Walt Disney
© 2018 Digital Laboratory Myanmar. All Rights Reserved. | fMovies Theme powered by WordPress